Ogaden News Agency (ONA) – Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Wardheer.
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Wardheer.
Posted by Wariye Qaran	/ June 6, 2019
Wararka ka imanaya Magaalada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo ayaa sheegaya in ciidanka Layuugu ay habeenimadii xalay guryahooda ugu daateen dad shacab ah oo kamid ah dadka magaalada isla markaana ay xabsiga dhigeen.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay ciidanku aad ubahdileen uguna caga jugleeyeen dadka shacabka ah kadib markay xili habeenimo ah ugu tageen guryahooda kana sookaxeeyeen.
Dhinaca kale dadkii shacabka ahaa ee ku xidh xidhnaa xabsiga wayn ee magaalada Wardheer ayaa lasheegayaa in ay saaka bilaabeen mudaharaad iyagoo xabsiga kudhex jira, waxaana lasheegayaa xaalad kacsan oo ka socota gudaha xabsiga.
Dhinaca kale waxaan war sugan laga haynin xubno katirsan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) oo maalin nimadii shalay ahayd la xidh xidhay kuwaas oo aan lagaranaynin sababta xadhigooda ka dambaysay.
Sidoo kale Bahda Warfaafinta JWXO waxay ka cudurdaaranaysaa dad aan maalintii shalay ahayd kusheegnay in laxidhay oo aan soo xaqiijinay in aan laxidh xidhin, waxaana bulsha karaali galinaynaa magacyada aan kusheegnay in la xidhay oo qaarkood ay xoryihiin.
Madaxda Dowlada Deegaanka iyo maamulka Gobolka Doollo ayaan ilaa hada wax war ah kasoosaarin xaalada magaalada Wardheer iyo dhibka sii kordhaya ee halkaas kajira.
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) waxay aad uga xuntahay dhibka soogaadhaya hambadii uu katagay waraabihii kuwaas oo filayay in ay helaan xuquuqda ay uleeyihiin dhinaca hadalka iyo aragtida.